Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte oo sheegay in qaxootiyaasha uu kusoo dhaweynayo dalkiisa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte oo sheegay in qaxootiyaasha uu kusoo dhaweynayo dalkiisa
November 17, 2016 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte. [Sawirka: Aljazeera]
Manila-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Filibiin Rodrigo Duterte ayaa sheegay in uu qaadayo qaxootiyaasha caalamka xilli wadamo badan oo reer galbeed ah ay ka xirteen xuduudooda dadka u barakacay.
Qiyaastii 1.8 milyan dad ah ayaa noqday qaxooti bartamihii sanadkii lasoo dhaafay ee 2015-ka, sida ay sheegayaan haayadaha qaabilsan qaxootiyaasha.
Madaxweyne Rodrigo Duterte ayaa taleefishinka Al Jazeera u sheegay go’aanka uu ku soo dhaweynayo qaxootiyaasha imaanaya dalka Filibiin, dalkaas oo ay ku noolyihiin 100 milyan dad gaaraya fakhriguna uu yahay mid baahsan.
“Waxaan u dirayaa iyaga. Waanu aqbali doonaa iyaga. Waanu aqbali doonaa dhammaantood. Waa bini’aadam,” ayuu u sheegay Dutera Al Jazeera.
Dutera ayaa sheegay in dalalka reer galbeedka ay u muuqdaan kuwo gacan ka geysta xuquuqul iinsaanka laakiin ay taasi si dhaqso isu badalayso.
Tan iyo markii la doortay, Dutera ayaa kordhiyay awooda milatariga iyo booliiska dalka Filibiin.
March 20, 2017 Dhowr qof oo rakaab ah oo ku dhaawacmay diyaarad ku burburtay garoonka diyaaradaha magaalada Wau ee Koonfurta Suudaan